बाल्यकाल तथा जीवनी[सम्पादन गर्ने]
पारिजातको जन्म दार्जिलिङको लिङ्गिया चिया बगानमा वि.सं. १९९४ बैशाख महिनामा भएको थियो। उनको पिता कालुसिंह वाइबा एक चिकित्सक थिए र माता अमृता मोक्तान हुन्। उनको न्वारनको नाम विष्णुकुमारी वाइबा हो, तर लामाले चेकुडोल्मा (तारा रानी) राखिदिएका थिए। उनलाई अमर बनाउने नाम भने पारिजात नै हुन पुगेको थियो, जुन उनी आफैँले रोजेकी थिइन्। उनका असङ्ख्य कृतिहरूले जीवन्त सुवास दिएर यस नामलाई सार्थक पारेका छन्। प्रारम्भिक पढाई दार्जिलिङ मै हासिल गरी वि.सं. २०११ सालमा काठमाडौँ भित्रिएकी पारिजातले पद्मकन्या विद्याश्रमबाट प्रवेशिका र पद्मकन्या कलेजबाट बी.ए. सम्मको पढाई हासिल गरेकी थिइन्। अङ्ग्रेजी बिषयमा एम.ए. गर्ने इच्छाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उनी भर्ना त भइन् तर २६ वर्षको उमेरमा शारीरिक असक्तता र लेखन कार्यमा विशेष सक्रिय भएका कारणले उनको इच्छा अधुरै रह्यो। दर्शनशास्त्र र साहित्य विषयका ग्रन्थहरू खोजीखोजी पढ्ने उनको बानी थियो। पारिजात एक सङ्घर्षशील नारी थिइन् । बाल्यावस्थामै आमाको मृत्यु भएकाले मातृस्नेह कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनले अनुभवसम्म गर्न पाइनन्। त्यसपछि उनले आफ्नो एकमात्र दाजुको वियोगको पीडा पनि खप्नुपर्यो। पिताको संरक्षण र रेखदेखमा काठमाडौँमा बसी अध्ययनमा लाग्दा उनले विभिन्न अभावहरूसँग जुध्नुपर्यो। वि.सं. २०२९ सालमा उनका पिताको देहावसान भएपछि उनी पितृस्नेहबाट पनि वञ्चित हुनुपर्यो।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=पारिजात_(साहित्यकार)&oldid=1040337" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १५:४७, २२ अक्टोबर २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।